Tena zavadoza tokoa ve ireo vaksiny andrana hanoherana ny Ebola? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2019 5:48 GMT
Vaksiny andrana hanoherana ny Ebola – sehatra ho an'ny daholobe
Araka ny antontanisa farany avy amin'ny OMS (Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana), mihafaingana be ny fihanak'ilay valanaretina any amin'ireo firenena telo tena voany. Ny 5 hatramn'ny 8 Oktôbra, 8.376 no isan'ireo olona voamarina fa tratra, ka 4.024 no namoy ny ainy.
Tao Liberià, 943 no tranga voarakitra tamin'ny 11 Oktôbra, 1.874 no ampozina ary 1.259 ireo efa ahiahiana. Tamin'ny 14 Oktôbra, tafakatra 3.254 ny isan'ireo tratra, ka 1.183 no namoy ny ainy ary 926 no voamarina fa mitondra ny aretina, tao Sierra Leone. Tao amin'ireo firenena ireo tsirairay avy, ny faritra avaratra irery ihany, any amin'ny sisintany iraisana amin'i Cote-d'Ivoire, no tsy nahitàna tranga, ary tahaka izany koa ny faharoa, tao amin'ny sisintany iraisana amin'i Ginea.
Ao Ginea, ny fikambanana tsy miankina “Médecins sans frontières (MSF)” manamarika fa nisy firongatana vaovao hitany tamin'ny viriosy Ebola ary efa tonga amin'ny fetra farany zakany ny fahafahany mandray marary ao Kônakry, renivohitra. Manampy izy hoe io tanàna io manokana no tena tratra amin'ity firongatra vaovao ity.
Manamafy ny hetsika ataony ny vondrompiarahamonina iraisampirenena mba hamongorana ilay valanaretina, tamin'ny alàlan'ny fandefasana manampahaizana manokana sy fitaovana entina manohana ireo rafitra ara-pahasalamana efa marefo talohan'ny nahatongavan'ilay valanaretina, ary efa manomboka tsy ampy olona amin'ny ambaratonga rehetra. Marobe ireo firenena nilaza fa nahita vaksiny na fanafody izay ny sasany efa nampiasaina sahady tsy nanaraka ny zotra fanao takiana ho an'ny fanafody rehetra alohan'ny hahazoany alàlana haparitaka eny amin'ny tsena. Amin'ny tranga hafa, misy ireo mpirotsaka an-tsitrapo hiasa ho toy ny ‘mpisava làlana’ amin'ireny fitsaboana vaovao ireny.
Tao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny tranonkala Journal du Mali, Célia d'Almeida manontany hoe; “Inona no mety hanjo ireo mpirotsaka an-tsitrapo?” no sady mamaly tahaka izao:
Azo lazaina ho tsy misy, hoy ireo mpikaroka. Izay indrindra, Izao tokoa, ny foto-tarazo hita ao anatin'ilay vaksiny andrana dia tsy afaka ny hanaitra ilay aretina ao anatin'ny olona iray vita vaksiny. Levona anatin'ilay vaksiny andrana ny foto-tarazon'ny Ebola avy any anaty selan'ny olombelona, fa tsy mampitombo azy. Ny mifanohitra amin'izay, manome fahafahana ny selan'ilay mpandray ny vaksiny izy mba hamoaka proteina iray ary io proteina io no miteraka valiny fiarovantena ao amin'ilay olona.
Eny am-boalohany dia tokony hoferana ihany ny fatram-baksiny atolotra mialoha ny fiafaran'ny taona. Ny fanentanana hanao vaksiny dia tokony hifantoka voalohany indrindra amin'ireo olona mifangaroharo amin'ny viriosin'ny Ebola, indrindra fa ireo mpiasan'ny fahasalamàna.
Heverina ho toy ny laharam-pahamehana ireo olona hafa mety ho tratra, indrindra fa ny havan'ireo olona efa voa, sy ireo olon'ny sampandraharaha natokana hikarakara ny fandevenana izay olona matin'ny viriosin'ny Ebola.